Nezvedu - ZhangZhou Yakanaka Kunze uye Export Co, Ltd.
Nharembozha / WeChat / WhatsApp: + 8615260692977
Yese Kugadzira Line mhinduro
Yakanaka Kambani, iine makore anopfuura gumi mubhizimusi rekunze nekutengesa kunze kwenyika, kubatanidza zvese zvinhu zvezviwanikwa nekuve pamusoro peanopfuura makore makumi matatu ezvakaitika mukugadzira chikafu, isu tinopa kwete chete zvigadzirwa zvine hutano uye zvakachengeteka zvekudya, asiwo zvigadzirwa zvine chekuita nechikafu - chikafu pasuru uye muchina wekudya.
Ichitarisa kuketani kubva kupurazi kuenda patafura, Yakanaka Kambani yakazvipira kuenderera mberi ichipa zvigadzirwa zvine hutano uye zvakachengeteka chikafu uye zvine hunyanzvi kurongedza chikafu uye chikafu chemuchina mhinduro kune vatengi vedu kuti vakunde kukunda.
PaKunakisisa Kambani, Isu tinovavarira kugona mune zvese zvatinoita. Nemafirosofi edu akatendeseka, kuvimba, muti-kubatsirwa, kuhwina-kuhwina, Takavakwa hukama hwakasimba uye hunogara nekusingaperi nevatengi vedu
Chinangwa chedu ndechekupfuura zvinotarisirwa nevatengi vedu. Ndokusaka tichiedza kuramba tichipa vatengi zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, zvakanak pamberi-pesevhisi uye mushure mebasa reimwe neimwe yezvigadzirwa zvedu.
Zhangzhou Yakanaka Kunze & Export Kambani iri muZhangzhou guta, padyo neXiamen, dunhu reFujian muChina. Kambani yedu yakavambwa muna 2007 nechinangwa chekutengesa kunze uye kugovera chikafu.
Zhangzhou Excellent kambani yanga ichishanda zvinobudirira mumusika wepasi rose wekudya. Kambani yedu yakavaka mukurumbira wayo seanopa zvigadzirwa zvine hutano uye zvemhando yepamusoro. Vatengi vanobva kuRussia, Middle East, Latin America, Africa, Europe nedzimwe nyika dzeAsia vanoramba vachigutsikana nezvigadzirwa zvedu. Kuve neanotungamira ekumusoro kwetekinoroji kugona, isu takamisikidzwa kuburitsa akasiyana ezvakanaka chikafu uye nekupa vatengi vedu mhinduro uye sarudzo dzisingaenzaniswi muukoshi, mhando uye kuvimbika.